लोकप्रिय बन्दै नेपाली स्किन ढोका, टिम्बर क्राफ्टले लुम्बीनी प्रदेशमा व्यापार थालेको ४ वर्ष पुग्यो | दर्पण दैनिक
प्रकाशित मिति: २०७८ कार्तिक १५ गते ०९:११
२०७२ सालको भुकम्पसम्म टिम्बर क्राफ्टमा उत्पादन भएका सबै ढोका खपत हुन्थ्यो । भुकम्प पछि सबै हाउजिङ र अपाटमेन्टमा असर पर्यो र बिशेषतः अग्ला अग्ला अपाटमेन्टहरु रेड जोनमा परेपछि हालसम्म नयाँ अपार्टमेन्टको शुरुवात भएको छैन तर हाउजिङ भने केहि बन्न थालेका छन । हाउजिङ निर्माणको काम बन्द भएसँगै आफ्नो मार्केट बन्द भएपछि टिम्बर क्राफ्टले सबैखाले घरकोलागि उपयुक्त हुने गुणस्तरको स्किन ढोका बनाएर बजार बिस्तार गर्न थाल्यो । जसको बजार देशभरि फैलिन पुग्यो । काठमाडौं तथा शहर मात्र सिमित स्किन डोरको बजार अहिले देशव्यापी बनेको छ ।
आज टिम्बर क्राफ्टका पालभरि सबै भन्दा धेरै रुचाईएको पाईन्छ । नयाँ बजारको बिस्तारकै क्रममा विस २०७४ मा पहिलो पटक हामी बुटवल छिर्ने प्रयास गर्यों र बुटवलका सबै जसो ढोका बेच्ने व्यापारी माझ टिम्बर क्राफ्टको ढोका नमुना (कबmउभि) को रुपमा पुर्यान थाल्यौं । त्यस लगत्तै बुटवलको देबिनगरमा अबस्थित वुटवलको सबै भन्दा धेरै प्रकारको ढोका बेच्ने र ढोकाको बारेमा धेरै जानकारि राख्ने मनसुन प्लाईसँग हाम्रो सहकार्य भयो । मनसुन प्लाईसँग मिलेर बुटवलमा हामीले ढोका बेच्न थाल्यौं ।
वुटवलका हाउिजङ, स्कुल, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा धेरैजसो घरहरुमा, सरकारि तथा विभिन्न कार्यलय र गाँउ गाँउका घरहरुमा टिम्बर क्राफ्टको ढोका प्रयोग गरेको देख्न सकिन्छ । आज टिम्बर क्राफ्ट र मनसुन एक साथ व्यापार गर्न थालेको ४ बर्ष लागेको छ ।
यो अवधिमा स्किन ढोका वातावरणीय दृष्टिकोणले, मुल्यको दृष्टिकोणले र गुणस्तरको दृष्टिकोणले उपयुक्त छ भनि लुम्बिनि प्रदेशमा चेतना फैलाउन सफल भएका छौं ।
आफ्नो घरको लागि ढोका चाहिएको होस या तपाईं ढोका ब्यबसाय गर्नकालागि ढोका चाहानु हुन्छ टिम्बर क्राफ्ट को ढोका लगायत सबै खाले ढोका र चौकोसको लागि पनि mansoon ply butwal -+977 985-7830713 मा सम्पर्क गर्न सक्नु हुन्छ ।
हरेक ढोको बिशेषता बुझ्न देखि व्यापार गर्न सर–सल्लाह लिन र तल खुलाईएका केही कारणहरु बुझ्न ।
किन ढाेका standard weight भन्दा बढि गर्हाै हुनु हुदैन ?
Sound proof किन चाहिन्छ ?
आफैले रङ्ग (Colour) लगाउन पाउँदा के फाईदा (Benifit) हुन्छ ?
ढाेका हेर्दा किन राम्राे चाहिन्छ ?
घाम पानी बाट धेरै समय सम्म टिक्ने ढाेका किन चाहिन्छ ?
मुख्य कुरा हामीले प्रयोग गर्ने हरेक बस्तु वा काठको प्रयोग गर्दा वातावरणलाई के फाईदा हुन्छ ? भन्ने कुराहरु जानकारी गराउनु अहिले को मुख्य आवश्यकता छ, हामी जानकारी पनि दिइरहेका छौं । नेपालमै उत्पादन भएको वातावरणमैत्री ढोका प्रयोग गर्न प्रेरणा जगाउदै आएका पनि छौं । अझ भन्दा विश्वले नै वातावरणीय दृष्टिकोणले उत्तम ठानेको स्किन ढोका हामीले पनि लुम्बिनी प्रदेश र नेपालभरि विस्तार गरिरहेका छौं ।
बेरोजगार युबालाई रोजगारि दिंदै र देशमा नै केही गर्नु पर्छ भन्ने आँट र हौसला प्रदान गर्न पनि टिम्बर क्राफ्ट लागिपरेको छ । टिम्बर क्राटट यहाँसम्म पुग्नुमा ढोका प्रयोग गर्ने सबै प्रयोग कर्ताको योगदान छ । आज सारा नेपालीले टिम्बर क्राफ्टको ढोका खोजि लगाउने चाहाना र्नुभएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा टिम्बर क्राफ्टको ढोका चाहिएमा या कुनै पनि पेरकारको ढोका संबन्धी सल्लाह तथा सुझाब चाहिएमा व्यवसायि माधब ज्ञावलीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुने छ । उहाँ नेपाल मोल्डेड डोर एसोसियसनको सल्ललहाकार पनि हुनुहुन्छ ।
सम्पर्कको लागि ।
Mansoon Ply Kalika Nagar Butwal
(लेखक : योगेन्द्रजंग बस्नेत, टिम्बर क्राफ्ट प्रालिको प्रबन्ध निर्देशक हुन)